Akabukeki ekhathazekile umqeqeshi wePirates ngokuhluleka kwezakhe ukubhubhudla iChippa seziyibanjelwe - Impempe
Akabukeki ekhathazekile umqeqeshi wePirates ngokuhluleka kwezakhe ukubhubhudla iChippa seziyibanjelwe
Iqembu lakhe belivele lizenzela kuChippa United nangaphambi kokuthi kube khona okhishwa ngekhadi elibomvu okushiye iChilli Boys seyiqhugela, kodwa i-Orlando Pirates yehlulekile ukuzidlela amahlanga.
Mhlawumbe ukuphuma kukaZakhele Lepasa ngenxa yokulimala kusaphele imizuzu emine umdlalo uqalile ngemuva kkulimala yikhona okuphazamise izinhlelo zeBhakaBhaka. Kodwa ke, endaweni yakhe kungene uGabadinho Mhango osezingeni elifanyo noma ngaphezulu kukaLepasa.
Ngemuva komdlalo, ubungalindela ukuthi umqeqeshi, uJosef Zinnabuer uzobe ediniwe noma ekhathazekile ngalobu buthaka obukhonjiswe yiqembu lakhe. Nokho le nsizwa yaseGermany beyizimoyizelela nje ngesikhathi ikhuluma nabezindaba ngemuva komdlalo.
“Ngemuva kwekhadi elibomvu bavele bayohlala emuva, kanti lokho kwenza kube nzima ukuthi ungathola igoli,” usho kanje uZinnbauer. “Kube sekudingeka ulinde isikhathi esifanele ukuze ukwazi ukuthola igoli,” kuqhuba yena.
Nokho uvumile ukuthi ukuhluleka ukushaya igoli umdlalo usanda kuqala kungenzeka ukuthi yikho okubafakela ingcondezi beze bagcine sebetatazela kwenzeke namaphutha.
“Ukube besisheshe salishaya igoli, umdlalo ubuzoba lula kakhulu kithi. Kuhlezi kunzima ukudlala nabantu abangasaphelele. Ngathi bavele bathole umdlandla ongeziwe bese belwela ukuthola iphuzu elilodwa okungenani. Bayalwa, futhi bazimisele ngokwengeziwe kunakuqala bese kuba nzima kuwe (odlala nabo).
“Kudingeke sibe nesineke, silinde, kanti okubalulekile wukuthi siwine – sikwenzile lokho,” kusho uZinnbauer.
Previous Previous post: Iwine sekuminciwe iPirates icishe imiswa yiChippa ebingasaphelele
Next Next post: Uphinde wasala encela izithupha umqeqeshi weLeopards ezakhe ziphinda ziphucwa iqatha emlonyeni